ဦးသန့် နှင့် ABSDF ~ Myanmar Express
"ဟေ့... မြန်မာဟာ မြန်မာပဲ။မန်မာဟာ မြန်မာပြည်မှာ နေရမယ်။မြန်မာပြည်မှာ သေရမယ်....။"(ဦးသန့်)ABSDF က မောင်မောင်စိုးပါ။ မြန်မာတော့ မြန်မာပါပဲ... ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာလဲ မနေခဲ့သလို.. မြန်မာပြည်မှာ မသေခဲ့ရပါဘူး။ ဖေါ့ဝိန်းမှာပဲ အသက်ထွက်သွားလို့ သဂြိုဟ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာတက်နိုင်သေးလဲ ဦးသန့်။ ဆွမ်းသွပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကလည်း မက်တက်ကြီး တရားဟောလို့ဟောလို့"အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရေမြေခြားကိုရောက်နေရပေမယ့်တစ်နေ့မှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရမယ်။အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် နိုင်င်ငံခြားသားလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှ စိတ်မကူးလေနဲ့...."(ဦးသန့်)အခွင့်အရေးတွေလည်း ယူပြီးသွားပါပြီ။ နိုင်ငံခြားသားလည်း လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ နိုင်ငံခြားမှာပဲ ဆက်နေပြီး နိုင်ငံခြားမှာ သေတော့မယ့်လူတွေပါ။ ဘာတက်နိုင်သေးလဲ ဦးသန့်။ Myanmar Express
Posted in: နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ,ဘာလဲဟဲ့ ABSDF
ခုချိန် ဦးသန့်အသက်ရှိနေသေးလို့ ဒီလူတွေကိုမြင်ရင် သူကိုယ်တိုင်စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိမ့်မယ်ခုချိန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအသက်ရှိသေးလို့ မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့ သူ့မြေး ကပြား ကမ်င်အဲရစ်ကိုမြစ်ရင် စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေလိမ့်မယ်
13 December 2011 02:21
ကောက်ရိုးပုံစောင့်သောခွေးသည် ကောက်ရိုးလည်းမစားရနောက်ဆုံးတွင် သခင်၏ရိုက်နှက်ခြင်းပဲခံခဲ့ရလေသည်။မြန်မာများဖြစ်ကာမှ အမျိုးသားရေးစိတ်က လွန်စွာမှနည်းလှလေသည်သမိုင်းကိုသိချင်ပါက သမိုင်းကိုရှာဖွေဖတ်ပါလေ့သင့်တွင် နိုင်ငံချစ်စိတ်မည်မျှရှိသနည်းသင်၏အပြုအမူများက ပြသခဲ့လေပြီ
13 December 2011 21:03
you think what is u thant
U Thant's grandson, Thant M. U is in Myanmar now, even he never say Myanmar. He is the one looking for money in Burma now., likes Daw Suu. I don't want those people are folly around Burmese., what is the best way to kick them out from Myanmar? Let's think!!
နိုင်ငံခြားက မြန်မာတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ အခြေအနေ အရ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပေမယ့် နိုင်ငံ့အပေါ် သစ္စာရှိတဲ့ မြန်မာတွေ အများကြီးပါ။ ယခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားအရေးမှာ ဘက်လိုက်သတင်းလွှင့်တဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြတာ ပြည်ပက မျိုးချစ်မြန်မာများ ပါဘဲ။ ဒီလိုဆန္ဒပြ မှုသတင်းတွေကို မဖော်ပြရဲတဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကမှ တကယ့်မျိုးမစစ်တွေပါ။
7 September 2012 00:34
ထားဝယ် အထင်ကရ ကမြောကင်း တံတားမှာ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦး ခုန်ချ၌ အဆုံးစီရင်မှု ဖြစ်ပွား
ထားဝယ်မြို့ ၏ အထင်ကရ တံတား တစ်စင်း ဖြစ်သော ကမြောကင်း တံတား ပေါ်တွင် မေလ ၂၁ ရက်နေ့မွန်းလွဲ ပိုင်းက အမျိုးသမီး တစ်ဦး တံတား ပေါ်မှ ခုန်ချပြီး အဆုံး စီရင်မှု...